🥇 ▷ Redmi note Xiaomi Pro 8 waxay timid Spain: Qiimaha rasmiga ah iyo helitaankiisa ✅
Redmi note Xiaomi Pro 8 waxay timid Spain: Qiimaha rasmiga ah iyo helitaankiisa
Redmi waxay ku sii wadataa siyaasadeeda soojeedinta iyo caalamiyeynta. Taleefannada gacantu waxay suuqa ka galaan India ama Shiinaha ka dibna xirxira, baro luqado cusub iyo dhul suuqyo kale, sida Isbaanish, nidaam la mid ah kii waalidkiis, Xiaomi lafteeda.
Kan ugu dambeeya ee ku bilaaba isla wadadii walaalihiis waa Redmi note 8 Pro, khadka taleefanka khadka dhexe ee aan horay u soo bandhignay oo hadda ugu dambeyntii imanaya waddankeenna, in kasta oo ay jirto dareen yar oo ka horreeya moodalka aan hore u ogaynay: waxaan haysan doonnaa 6GB oo RAM ah. Ugu yaraan, qoritaan.
Sidoo kale waa Redmi Note 8 iyo Note 8 Pro
6.3 inji FullHD +
6.53 inji FullHD +
161.35 x 76.4 x 8.79 mm; 199.8 g
8 MP xagal ballaaran
2 MP qoto dheer
18W si deg deg ah
Laga bilaabo 999 yuan (qiyaastii 126 euro)
Laga bilaabo 1,399 yuan (qiyaastii 177 euro)
6.53 inji iyo ku dhawaad ​​200 garaam oo culeys loogu talagalay taleefanka cusub ee ‘Xiaomi’ oo aan hadda ka iibsan karno dhulkeenna. Taleefoon soo dhacaya, oo ka duwan walaalkiis ka yar, oo leh Helio G90T safka hore ee howlaha, taasoo cadeyneysa inaan wajahayno taleefan diirada saara qaybta ‘ciyaaraha’ kaasoo doonaya inuu isku tuuro awooda ugu badan ee siinta dabeecada ciyaaraha.
4,500 mAh awooda aaladda, afar kamarado gadaal gadaal u leh 48 megapixel sensor ugu weyn Waxay ka taxadaraan sawir qaadista iyo deked NFC oo loogu talagalay lacag bixinta mobilada waa qaar ka mid ah astaamaha ugu weyn. Hadana taleefanka mar hore ayuu na dhex yaallay qiimayaasha aan ku heli karnona waa kuwan soo socda.
Maskaxda MediaTek, 4,500 mAh batari iyo afar kamaradood oo dhabarka ku yaal
Moodeelka leh 6GB RAM iyo 64GB oo kaydinta gudaha ah ayaa diyaar noqon doona 249 euro, in kasta oo aan yeelan doonno dallacsiin gaar ah 24ka saacadood ee ugu horreeya oo leh 20 euro oo dhimis ah, taas oo taleefanka uga tegi doonta 229 euro. Moodeelka leh 6GB oo RAM ah iyo 128GB waa 269 euro, halkanna ma hayno wax horumar ah, oo aan ka ahayn imaatinka dambe walaalkiis.
Qaabka aasaasiga ah ayaa la heli doonaa 26ka Sebtember Dukaanka khadka tooska ah ee ‘Xiaomi’, dukaamada muuqaalka jirka iyo sidoo kale Aliexpress halka midka labaadna aan wax yar sugi doono. Gaar ahaan, illaa Sebtember 30 oo waxaan ku yeelan doonnaa isla dukaanno marka lagu daro Amazon. Hadaad isaga sugeysay, waa halkaan.
Redmi note 8 Pro oo leh 6GB iyo 64GB: 249 euro, 229 euro oo hormarin ah.
Redmi Note 8 Pro oo leh 6GB iyo 128GB: 269 ​​euro.
La wadaag Redmi Note Xiaomi Pro 8 waxay timid Spain: Qiimaha rasmiga ah iyo helitaankiisa